Taariikh, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Kaniisadda Caalamiga ah ee Ilaah ee ku-meel-gaarka ah WKG, Ingiriisiga Kaniisadda Adduunka ee Ilaah (ilaa iyo Abriil 3, 2009 Grace Communion International), waxay bedeshay mowqifkeedii ku aaddan dhowr rumeeysan iyo dhaqameed sanadihii la soo dhaafay. Isbeddeladaani waxay salka ku hayeen mala awaal ah in badbaadadu ka timaado nimco xagga rumaysadka. In kasta oo aan taas ku wacdinnay waagii hore, haddana had iyo goor waxay xidhiidh la leedahay farriinta ah in Eebbe noogu abaalmariyo shaqooyinkeenna qoduuska ah, ee dabeecad ahaan keliya ah.
Tobannaan sano, waxaan ka fiirsannay ku-haynta sharciga mid aan xad-gudub lahayn oo saldhig u ah caddaaladdayada. Rabitaankeenna xiisaha badan ee ah inaan ka farxinno isaga, waxaan isku daynay inaan xiriir Ilaah la samayno iyada oo loo marayo shuruucda iyo xeerarka Axdiga Hore. Nimcadiisa ayuu Ilaah ina tusay in dhammaan waajibaadka Axdiyada aysan quseyn Masiixiyiinta marka loo eego axdiga cusub.
Wuxuu inaga keenay hodan nimcadiisa iyo xiriir cusub oo lala galo ciise masiix. Wuxuu qalbiyadeenna iyo dareenkeenna u furay farxaddiisa badbaadadiisa. Qorniinku wuxuu nagula hadlaa macno cusub oo waxaan ku raaxeysanahay xiriirka shaqsiyeed ee aan la leenahay Rabbigeenna ah Badbaadiyeha maalin kasta.
Isla mar ahaantaana, waxaan si xanuun leh uga warqabnaa culeyska culus ee soo maray. Fahamkeena caqiido ee caqiidada ayaa qariyey injiilka ciise masiixiga waxayna u horseedeen gunaanad khaldan oo kala duwan iyo dhaqamada aan sharciga aheyn. Wax badan oo aan ka qoomameyno waa inaan wax badan ka raaligelinaa.
Waxaan leenahay ruux jihooyinka ah oo is-xaq badan - waxaan cambaareynay masiixiyiinta kale anagoo ugu yeernay "waxa loogu yeero Masiixiyiin", "khiyaaneeyey" iyo "aaladaha shaydaan". Waxaan siinay xubnaheena qaab ku saleysan shaqada oo ku wajahan nolosha Christian. Waxaan codsanay in loo hoggaansamo qodobbada culus ee sharciga Axdiga Hore. Waxaan u qaadanay dariiqa sharciga ah ee hogaaminta kaniisada.
Maanteennii hore ee Axdiga Hore waxay dhiirrigelisay dabeecadaha keli keli ahaanta iyo isla weynaanta, halkii ay ka ahayd caqiidada Axdiga Cusub ee ku saabsan cibaadada iyo midnimada.
Waxaan si xad dhaaf ah u faafinay wax sii sheegista saadaalinta iyo saadaalinta sheegista, markaan hoos u dhigno injiilka runta ah ee badbaadada xagga Ciise Masiix. Casharradan iyo waxbariddan ayaa ah il laga qoomameeyo. Waxaan si xanuun leh uga warqabnaa murugada iyo dhibaatada keentay.
Waan qaldameen, waan qaldan nahay. Marna ma jirin wax damac ah oo cid lagu marin habaabiyo. Waxaan si aad ah diirada u saarey waxaan aaminsanahay inaan u sameyno Eebbe oo aanan aqoonsaneen dariiqii ruuxiga ahaa ee aan ku jirnay. Haddii loogu talo galay iyo in kale, jidkan ma ahayn mid kitaabiga ah.
Markii aan dib u milicsanno, waxaan isweydiineynaa sideyn u khaldami lahayn sidaas. Quluubteenu waxay u soo baxaan kuwa ku qaldamay waxbariddeenna qoraalka ah. Kama yareyno jahawareerkooda iyo jahwareerkooda. Waxaan si dhab ah u raadineynaa fahamkaaga iyo cafiskaaga.
Waxaan fahamsanahay in qoto-dheer ka-go'itaanka ay fududeyn karto dib-u-heshiisiinta. Heerka aadanaha, dib-u-heshiisiintu inta badan waa geeddi-socod dheer oo adag oo wakhti qaadanaysa. Laakiin waan u duceyneynaa maalin kasta waanaan garowsanahay in wasaaradda bogsiinta Masiixa ay xireyso xitaa dhaawacyada qotoda dheer.
Annagu iskuma dayin inaan daboolno khaladaadka caqiido ahaaneed ee la soo dhaafay iyo qaladaadka kitaabiga ah. Ujeeddadeena maahan inaan kaliya daboolno dillaacyada. Waxaan sheekadeenna toos uga hor tagnaa oo aan wajahnaa khaladaadka iyo dembiyada aan helno. Had iyo jeer waxay qayb ka noqon doonaan taariikhdeena iyagoo si joogto ah noo xusuusinaya halista sharci ahaaneed.
Laakiin ma noolaan karno taariikhdii hore. Waa inaan sare uga qaadnaa wixii aan soo dhaafnay. Waa inaan sii wadnaa. Waxaan Rasuul Bawlos ku idhi: "Waan illoobay wixii ka dambeeya oo gaadha waxa kahoreeya oo ugaarsada hadafka horay loo dejiyey, qiimaha guusha ee yeedhitaanka jannada Eebbe ee Ciise Masiix" (Filiboy 3: 13-14).
Markaa maanta waxaan taaganahay cagta iskutallaabtu - astaanta ugu dambaysa ee dib-u-heshiisiinta oo dhan. Waa aasaaska guud ee ay ku wada hadli karaan dhinacyada shisheeyaha ah. Annagoo ah Masiixiyiin ahaan, dhammaanteen waxaan aqoonsannahay silica halkaas ka dhacay waxaana rajeyneynaa in aqoonsigan uu inagu wada keeno.
Waxaan jecel nahay inaan la kulanno qof walba oo aan ku dhaawacno halkaas. Kaliya waa dhiigga Wanka iyo xoogga Ruuxa ee noo saamaxaya inaan ka gudubno dhibaatooyinka oo aan gaarno hadafkeena guud.
Sidan ayaa ah sida aan ugu muujiyo raali gelinta iyo quluubta guud ee dhammaan xubnaha, xubnihii hore, iskaashatada iyo dadka kale - dhammaan dhibanayaashan dembiyadeenii hore iyo marin-habaabinta Qorniinka. Aniguna waxaan kugu martiqaadayaa inaad nagala soo qayb qaadato wacdinta runta ah ee Ciise Masiix adduunka oo dhan sida hadda Ilaahay noogu barakeeyo koritaanka iyo xooggeeda wasaaraddiisa.